date_range 08 March 2017
visibility 11890 Views
Google Pixel ဖုန်းတွေမှာ စပါဝင်ခဲ့တဲ့ Google Assistant ကို အခုဆိုရင် Android Marshmallow နဲ့ Nougat ဖုန်းတွေမှာပါ အသုံးပြုလို့ရနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆည် US နဲ့ Europe နိုင်ငံတစ်ချို့မှာပဲ အသုံးပြုလို့ရဦးမှာဖြစ်ပေမယ့်၊ ကျနော်တို့ ဆီမှာလည်း မကြာခင်အသုံးပြုလို့ရတော့မှာပါ။
ဒါဆို Google Assistant က ဘာများလဲ? ကိုယ့်အတွက် ဘာတွေအသုံးဝင်လဲ? ဘာတွေ လုပ်တတ်သလဲ? ဆိုတာ ကြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
Digital Assistant ဆိုတာ
Google Assistant ဆိုတာ Google ကနေ အသစ်ထုတ်ထားတဲ့ Virtual Assistant (ဝါ) Digital Assistant ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ စမတ်ဖုန်း OS အားလုံးမှာ ကိုယ့်အသံနဲ့တင် စေခိုင်းနိုင်တဲ့ Virtual Assistant ကိုယ်စီရှိပါတယ်။ iPhone ဆို အားလုံးသိကြတဲ့ “Siri” ၊ Windows 10 ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပြူတာတွေဆို Cortana ( Cortana က Android မှာလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်) နဲ့ Android အတွက်ဆို “Google Assistant” ပါ။ တခြား Third-party Virtual Assistant တွေဖြစ်တဲ့ “Viv” တို့ဘာတို့လည်း ရှိပါတယ်။ သူတို့အားလုံးကို သက်ဆိုင်ရာနာမည် (Hey Siri, OK Google, Hey Cortana စသဖြင့်) လှမ်းခေါ်ပြီး၊ အသုံးချနိုင်ပါတယ်။
ဒီမှာ ပထမဆုံးရှင်းပြချင်တာက “Virtual Assistant” ဆိုတဲ့ အခေါ်အဝေါ်ပါ ။ “ Personal Digital Assistant” ဒါမှမဟုတ် “Intelligent Personal Assistant” လို့လည်း သုံးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်ကနေ ရုံးစီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်တွေကို လုပ်ပေးတဲ့ အလုပ်အကိုင်နာမည်ကိုလည်း “Virtual Assistant” လို့ ခေါ်ကြတာကြောင့် “Digital Assistant” ဒါမှမဟုတ် “Intelligent Personal Assistant” ဆိုတာက ပိုသင့်တော်မယ်ထင်ပါတယ်။
“Personal Digital Assistant” ကို တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ရရင် ကိုယ်ပိုင်ဒီဂျစ်တယ်အတွင်းရေးမှုးလေးပေါ့။ ကိုယ်ရှာခိုင်းတာလေးတွေ ရှာပေးမယ်၊ ကိုယ်သတိပေးဖို့ မှတ်ခိုင်းထားတာလေးတွေ မှတ်ထားပြီး သတိပေးမယ်။ ကိုယ်ခိုင်းတဲ့တာဝန်လေးတွေ လုပ်ပေးမယ်။ ဟာသလေးတွေလည်း ပြောတတ်တယ်ပေ့ါ။ တကယ့် လူအတွင်းရေးမှူး(မ) လေးလိုပါပဲ။ အဲ...ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့လို Nerds တွေအကြိုက် ဖွန်ကြောင်လို့လည်းရသေးတယ်ပေါ့။ ( ဒါပေမယ့် Nerds တွေကို လူမလေးတွေ မပြောနဲ့ Digital Assistant မလေးကတောင် ကြိုက်မှာမဟုတ်တော့ Result ကို သိပ်တော့ မမျှော်လင့်ထားနဲ့ပေါ့လေ။)
Google Assistant ရဲ့ အရင်ဗားရှင်း Google Now က “Digital Assistant” အဆင့်လောက်ပဲ ရှိပေမယ့်၊ Google Assistant ကျတော့ AI နည်းပညာက ပိုမြင့်လာပြီး “Intelligent Personal Assistant” ပိုဖြစ်သွားပါတယ်။ ဘာတွေကွာသွားလဲဆိုတာ အောက်မှာထပ်ရှင်းပြသွားပါမယ်။
Google Now နဲ့ Google Assistant ဘာကွာလဲ
အခုလက်ရှိ ကျနော်တို့ဆီမှာ Google Assistant မရသေးဘူးဆိုပေမယ့် အခုလက်ရှိ ခင်ဗျားတို့၊ ကျနော်တို့ကိုင်နေတဲ့ Android ဖုန်းတွေမှာ Digital Assistant ပါပြီးသားပါ။ ဖုန်းရဲ့ Home ခလုတ်ကို ဖိနှိပ်ထားပြီး “OK Google” လို့ အသံနဲ့ ခေါ်ကာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီကောင့်နာမည်က “Google Now” ပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ “Google Assistant” ဆိုပြီး ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
Google Now ကို အင်တာနက်က Information အချက်အလက်တွေရှာဖွေခိုင်းတာ၊ ဖုန်းထဲက Apps တွေကို ဖွင့်ခိုင်းတာ၊ ဖုန်း Settings တစ်ချို့ကို ပြင်တာ၊ သီချင်းဖွင့်ခိုင်းတာ၊ မိုးလေဝသအခြေအနေမေးတာ၊ Alarm နဲ့ Reminder ပေးတာ စတဲ့ Information အပေးအယူအလုပ်တွေ အဓိကလုပ်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ တချို့ ပေါက်ကရမေးခွန်းတွေလည်း လျှောက်မေးနိုင်ပါတယ်။ ( ဥပမာ - “Make measandwich” လို့ မေးကြည့်) ။
ဒါပေမယ့် ကြိုတင်ပရိုဂရမ်ပေးထားတဲ့ မေးခွန်းနည်းနည်းပဲ ရပါတယ်။ သာမန် လူတစ်ယောက်ကို စကားပြောနေသလို စိတ်ရှိတိုင်းပြောမရပါဘူး။ ဥပမာ - “What do you think of iPhone?” လို့ မေးရင် Google Now က Search Results တွေပဲ ကျပေးပေမယ့်၊ Google Assistant အပါအဝင် Siri တို့ Cortana တို့ကျ သူတို့အမြင်လေးတွေ ပြန်ဖြေတတ်ပါတယ်။
ပြောရမယ်ဆိုရင် Google Assistant က Google Now ထက် စကားတော်တော်များများကို လူတစ်ယောက်လို ပြန်ဖြေလာနိုင်ပြီး၊ Conversational ပိုဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ တုံဏှိဘာဝေ Google Now နဲ့ စကားတတ်လေး Google Assistant တို့က တော်တော်ကြီး ကွာသွားတာပါ။
Google Assistant နဲ့ တခြား Digital Assistants တွေရော ဘာကွာလဲ?
တခြား ဘယ် Assistants နဲ့မှ မတူတာက Google Assistant မှာ Artificial Intelligence နည်းပညာက Siri တို့ Cortana တို့ထက် ပိုမြင့်လာပါတယ်။ Google Assistant က ကိုယ်အရင်က ပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို အသေးစိတ်မှတ်သားထားနိုင်ပြီး၊ ပြန်လည်ပြောပြတာ၊ ပြန်လည်အသုံးပြုတာတွေ လုပ်နိုင်လာပါတယ်။ ဥပမာ - ကိုယ်က အရင်တုန်းက “ Turquoise is my favorite color” လို့ ပြောထားရင် Assistant က ဒါကို မှတ်ထားမှာပါ။ နောက်ရက်တွေကြာမှ “What’s my favorite color” လို့ ပြန်မေးရင်တောင် သူက သတိတရပြန်ဖြေတတ်ပါတယ်။ Siri ကော Cortana မှာပါ ဒီလိုမရပါဘူး။
ဒါက သိပ်ဘာမှမထူးခြားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တစ်ခုလို့ ထင်ချင်စရာပါ။ ဒါပေမယ့် Google က ဒါကို မျှော်လင့်ချက်အများကြီး ထား,ထားပါတယ်။ ခင်ဗျားက Google Assistant နဲ့ စကားတွေ ပိုပိုပြောလာလေလေ Google Assistant က ခင်ဗျားအကြောင်း ပိုသိလာလေ၊ ပိုအသုံးဝင်လာလေ ဖြစ်လာတာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာဆို Google Assistant ကို ပွဲအချိန်မှတ်ခိုင်းတာလေးတင် မဟုတ်ဘဲ၊ ပွဲတစ်ပွဲကိုပါ လုံးဝစီစဥ်ခိုင်းတဲ့အထိ ဖြစ်လာနိင်ပါတယ်။
ဘယ် Device တွေမှာ Google Assistant ရမှာလဲ?
အရင်တုန်းကတော့ Google က ထုတ်တဲ့ Pixel ဖုန်းတွေနဲ့၊ Google Allo App၊ Google Home ၊ Android Wear 2.0 သုံး စမတ်နာရီတွေမှာပဲ ရပေမယ့်၊ အခုဆို Android Marshmallow နဲ့ Nougat သုံး ဖုန်းတွေမှာ သုံးလို့ရတော့မှာပါ။
Google Assistant က ဘာတွေများလုပ်နိုင်လဲ?
သူလုပ်နိုင်တာတွေကတော့ အများကြီးပါ။ အောက်ပါစာရင်းကတော့ အသုံးဝင်ဆုံးနဲ့ အသုံးအများဆုံး Features တွေဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းစခရင်ကို ကိုယ့်အသံနဲ့ Unlock လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Applications တွေကို အသံနဲ့တင် ဖွင့်ခိုင်းနိုင်တယ်။
Google Image ကနေ ပုံတွေရှာခိုင်းနိုင်ပါတယ်။
အနီးနားက စားသောက်ဆိုင်ကောင်းကောင်းလေးတွေ ရှာခိုင်းနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုထပ်မိုက်တာက ပြပေးတဲ့ စားသောက်ဆိုင်လေးတွေမှာ Star Rating လေးတွေါပြီး၊ Card ဒီဇိုင်းလေးတွေနဲ့ ဖြစ်တာကြောင့် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ စားသောက်ဆိုင်ကို နှိပ်ပြီး၊ Booking ယူတာ၊ အော်ဒါမှာတာတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အပန်းဖြေခရီး ဘယ်သွားလို့သွားရမှန်းမသိဖြစ်နေလဲ Google Assistant ကို မေးနိုင်ပါတယ်။
ဘောလုံးပွဲအပါအဝင် အားကစားပွဲတွေရဲ့ ရလဒ်တွေကို မေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ရာသီဥတုအခြေအနေ ဘယ်လိုရှိလဲ ရှာကြည့်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ဖုန်းထဲကသီချင်းတွေကို အသံနဲ့တင် ဖွင့်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။
Email တွေ စစ်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီ့အပြင် Google Services အကုန်လုံး ( Calendar, Keep ) စတာတွေ အကုန်လုံးကို Google Assistant နဲ့ ခေါ်သုံးနိုင်ပါတယ်။
Reminder တွေ ပေးထားနိုင်ပါတယ်။ သတိမေ့တတ်တဲ့သူတွေအတွက် တော်တော်အသုံးဝင်တဲ့ Feature ပါ။
မနက် ဘယ်အချိန်နှိုးပေးပါ ကစပြီး ကြိုက်တဲ့ Alarm ပေးထားနိုင်ပါတယ်
ဖုန်းကို လက်ကကိုင်စရာမလိုဘဲ Google Assistant နဲ့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို ဖုန်းခေါ်ခိုင်းတာ၊ မက်ဆေ့ပို့ခိုင်းတာတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Contact ထဲက နာမည်တွေကိုပြောလိုက်ရုံနဲ့လည်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဖုန်းအသံအတိုးအချဲ့ကအစ Wi-Fi ဖွင့်တာအဆုံး ဖုန်း Settings တွေကို ပြင်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။
Third Party Services တွေကို ဖွင့်ပေးထားတာကြောင့် Google Assistant နဲ့ ချိတ်ထားတဲ့ တခြား အိမ်တွင်းသုံးစမတ်ပစ္စည်းတွေကို လှမ်းထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။
အချိန်ရေတွက် (Countdown) လုပ်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။
ပျင်းရင် Google Assistant နဲ့ ဂိမ်းကစားလို့ရပါတယ်။
Google Assistant နဲ့ အင်တာနက်က ကိုယ်ကြိုက်တာမှန်သမျှကို ရှာနိုင်ပါတယ်။
ဘာသာကစား ၁၈၈ မျိုးကို အသံထွက်နဲ့တကွ ဘာသာပြန်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။
Google Assistant နဲ့ ရောက်တတ်ရာရာ တော်ကီထိုင်ပစ်နေလို့ရပါတယ်။ ပျင်းရင် ဟာသပြောခိုင်းတာ၊ စကားထာဝှက်တာတွေပါ လုပ်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ပေါက်ကရမေးသမျှ မေးခွန်းအားလုံးနီးပါးကို Google Assistant က ဖြေပေးနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို သူအဖြေမသိရင်တောင် Google ကနေ ရှာပေးနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ တစ်ခါတစ်လေ သူပြန်ဖြေတဲ့အဖြေလေးတွေက ရယ်စရာတော်တော်ကောင်းသလို၊ ချစ်ဖို့လည်း ကောင်းပါတယ်။ (နောက်ပိုင်းမှာ Google Assistant ကို ခိုင်းစေနိုင်တဲ့ Commands စာရင်းကို တင်ဆက်ပေးပါမယ်။)
ကျနော့်ကိုယ်ပိုင်အမြင်ပြောရရင် Google Assistant အပါအဝင် Digital Assistant တော်တော်များများဟာ အခုအချိန်မှာ အရမ်းအသုံးဝင်ကြီးတော့မဟုတ်ပေမယ့်၊ တစ်ခါတစ်လေ သူတို့နဲ့စကားပြောနေရတာကိုကတင် စိတ်အပန်းပြေပါတယ်။ “I think I’m in love with you”, “I am naked now” စသဖြင့် ပေါက်ကရတွေ လျှောက်ပြော၊ သူက ပေါက်ကရတွေလျှောက်ဖြေတာကိုက Digital Pleasure တစ်ခုပေးပါတယ်။
အခုအချိန်မှာ Digital Assistant တွေဟာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနည်းပညာအဆင့်သာရှိသေးတာကြောင့် လုပ်ဆောင်ချက်တွေက အရမ်းကြီးမမြင့်မားပေမယ့်လည်း နောက်တစ်ချိန်မှာတော့ Iron Man ရုပ်ရှင်တွေထဲက JARVIS တို့လို အဆင့်မြင့် AI စနစ်တွေ မဖြစ်လာနိုင်ဘူးလို့ ပြောမရပါဘူး။
စဥ်းစားကြည့်လေ။ အခုအချိန်မှာတောင် ဖုန်းကို ကိုယ့်လက်နဲ့ ထိစရာမလိုဘဲ “OK Google” , “Hey Siri”, “Hey Cortana” စသဖြင့် လှမ်းခေါ်ပြီး ဒီဂျစ်တယ်ဝေယျာဝစ္စလေးတွေကို ခိုင်းနိုင်တာက ဘယ်လောက်များမိုက်လိုက်သလဲ။
တကယ်လို့ ခင်ဗျားဟာ စမတ်ဖုန်းတွေ ကိုင်နေပြီး၊ Digital Assistant လေးတစ်ယောက်တောင်မှ အကူမခေါ်ထားဘူးဆိုရင်တော့ တော်တော်ခေတ်နောက်ကျနေပါပြီ။
အခုဆိုရင် Google Assistant ကို iOS မှာလည်း App တစ်ခုအနေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
Features Google Google Assistant Android Google App Artificial Intelligence Digital Assistant Featured Articles Android Nougat Intelligent Digital Assistant